Gaalkacyo oo la filayo in ay soo gaaraan wakiilka Q/M Meachal Keating iyo wafdi uu horkacayo. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Gaalkacyo oo la filayo in ay soo gaaraan wakiilka Q/M Meachal Keating...
Gaalkacyo oo la filayo in ay soo gaaraan wakiilka Q/M Meachal Keating iyo wafdi uu horkacayo.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in goor dhaw uu halkaa ka degay wakiilka gaar ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating iyo saraakiil kale.
Wafdiga QM ee goor dhaw tagay magaalada Gaalkacyo ayaa qeyb ka ah wafuud kale oo la sugayo saacadaha soo socda kuwaa oo dhamaantood qeyb ka noqon doona wadda hadallo la filayo in ay uga furmaan magaalada madaxweynayaasha labada dowlad gobolleed ee Puntland iyo Galmudug.
Dagaalo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhaxeeya labada maamul ayaa todobaadyadii ugu danbeeyay waxaa ay ka dhaceen magaalada Gaalkacyo, kuwaa oo sababay dhimashada dad rayid ah iyo barakaca kumannaan qoysas ah oo ku dhibaateysan daafaha magaalada.
Imaatinka wakiilka QM Meachal Keating ayaa kusoo beegmaya iyadoo Colaada Gaalkacyo soo noq noqotey,uuna yahey ninka ugu saameynta badan Siyaasadda Soomaaliya si loo dareensiiyo dhinacyada isku haya Gaalkacyo hugaankooda in aan loo dulqaadan karin dagaal Gaalkacyo kasii socda.
Ugu danbeyntii, mas’uuliyiinta la fillayo in ay shirka goob joog ka noqdaan waxaa ka mid ah ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharm’arke oo saacadaha soo socda lagu waddo in uu gaaro magaalada Gaalkacyo.
Previous articleEdmanton Canada oo Gabadhii u horeysey ee soomaali ah loo qorey Booliska magaaladaas.
Next articleJL- Kismaayo oo Doorashada Aqalka hoose ee barlamaanka federalka soomaaliya ka socoto iyo xubnaha guuleystey.